ပို့ပါ3ဆူဒန်ဖောက်သည်များအတွက်မြေပဲကို Decorticator စက်ကိုသတ်မှတ်
မြေပဲကိုပဲမြေပဲအဖြစ်လူသိများသည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်စားသုံးနိုင်သောမျိုးစေ့များအတွက်စိုက်ပျိုးသည်. မြေပဲထပ်စိုက်ပျိုးသည် 22.2 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးဟက်တာသန်း, ၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိလူများအတွက်ပရိုတင်းကြွယ်ဝသောအရင်းအမြစ်အဖြစ်ဆယ်စုနှစ်များစွာအသုံးပြုခဲ့သည်, ယင်း၏ oilseed နေစဉ်, ကိတ်မုန့်နှင့်တုပ်ကွေးများကိုအစဉ်အလာအားဖြင့်တိရိစ္ဆာန်အစာအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ အပူပိုင်းနှင့်အပူပိုင်းဒေသများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာစိုက်ပျိုးကြသည်, ထိုကဲ့သို့သောအာရှနှင့် Africa.it ရဲ့အဖြစ်အသေးစားနှင့်ကြီးမားသောစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်သူမှအရေးကြီးသောဖြစ်ခြင်း.
ဒီဇာတိတောင်အမေရိကပဲမျိုးကိုအာဖရိကတိုက်သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချလာသူတွေကအာဖရိကကိုယူဆောင်လာကြသည် 200 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ. ဒီနေ့, ဆူဒန်ဂုဏ်ယူစွာဝါကြွား 14% ကမ္ဘာ့စုစုပေါင်းမြေပဲရဲ့ထုတ်လုပ်မှု၏,အရာသည်ဆူဒန်နိုင်ငံအတွက်များစွာလိုအပ်သောနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူငါး ဦး တွင်တစ်ခုဖြစ်သည်. တကယ်တော့, မြေပဲစိုက်areaရိယာအကြောင်းကိုကိုယ်စားပြုတယ် 35% စုစုပေါင်းငွေသားသီးနှံofရိယာ၏.
ရိတ်သိမ်းမှုသည်အောက်တိုဘာလကုန်နှင့်ဆူဒန်နိုင်ငံတွင်နို ၀ င်ဘာလတွင်ပြုလုပ်သည်။ မြေပဲများလုံလောက်စွာခြောက်သွေ့သွားသည်, လယ်သမားများသည်၎င်းမှကောက် ယူ၍ အမြန်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်။ မြေပဲကိုစနစ်တကျခြောက်သွေ့စေရန်နှင့်ခြောက်သွေ့သောအခြေအနေတွင်သိုလှောင်ရန်အထူးအရေးကြီးသည်. ဒါပေမယ့်တောင်သူလယ်သမားကိုမြေပဲခွံကိုကူညီနိုင်အောင်မြေပဲခွံစက်နည်းနည်းပဲရှိတယ်။ ,၎င်းကိုလက်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အာဖရိကအမျိုးသမီးများသည်ထောင်နှင့်ချီသောမြေပဲများကိုလက်ဖြင့်သေနတ်ဖြင့်ပစ်သည်. နှေးသွားတယ်, သူတို့ရဲ့လက်ချောင်းများသွေးထွက်စေသောနာကျင်အလုပ်. အချိန်ကြာမြင့်စွာအပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်း ,ဆင်းရဲသောသိုလှောင်မှုအခြေအနေများအတွက်မြေပဲ, သူတို့ကမှိုမှို Aspergillus flavus ကြောင့်ကူးစက်ခံရနိုင်သည်. ဤမှို၏မျိုးကွဲများစွာသည် aflatoxins ဟုခေါ်သောအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သောအရာများကိုထုတ်လွှတ်သည်။ အကယ်၍ မျိုးစေ့သည်မှိုမှို Aspergillus flavus မှကူးစက်ပါက,ဒါကစျေးကွက်ထဲမှာအချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်,ဆိုလိုသည်မှာလယ်သမားသည်သူတို့၏နှစ်စဉ်လုပ်အားရလဒ်များဆုံးရှုံးလိမ့်မည်.
လူအချို့ကဒီအခြေအနေကိုမြင်ပြီးလယ်သမားကိုဒီအလုပ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်အောင်ကူညီပေးချင်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တစ်ယောက်ကမှာထားတယ်3မတ်လအစတွင်ဒီဇယ်မြေပဲကို Decorticator စက်တပ်ဆင်ထားသည်။ သူသည်သူ့မြေပဲခွံကိုဤမြေပဲခွံသုံးစက်ကိုအသုံးပြုလိုသည်။ ,ထို့အပြင်ဤစက်ကို အသုံးပြု၍ အခြားရွာသူလယ်သမားများအတွက်မြေပဲကိုအခွံခွာရန်ဖြစ်သည် ,သူကကျွန်တော်တို့ဟာမြေပဲ decorticator.it ရဲ့အလိုတော်အတွက်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကိုသူ့တိုင်းပြည်ရှိလျှပ်စစ်မော်တာထက်အများကြီးအသုံးဝင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။,သူ၏မိတ်ဆွေတစ် ဦး ကဤသို့သော machine.he ကိုလိုချင်သည်။ usah ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ လက်စွဲပဲမြေပဲကို decorticator စက်အတွက်လာမည့်လတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။.